सेलेब्रेटीलाई जे भने पनि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ ! - Sawal Nepal
सृजना पोख्रेल २ श्रावण २०७७, शुक्रबार २१:४४
सृजना पोख्रेल/ मानिलिनुस्, आज तपाईंको बिहे हुँदैछ। तपाईंका बेहुला मण्डपको धुवाँले आँखा पोलेको बहाना बनाउँदै तपाईंको बेहुली रूपलाई सुटुक्क चोरेर हेर्छन्।
तपाईं पनि उनलाई सुटुक्क हेर्दै मनमनै वाचा गर्नु हुन्छ- ‘हामीले हामीलाई भेट्नु अगाडिका सबै असफल प्रेमलाई यही मण्डपको आगोमा जलाइदिऊँ है?’
‘के जमाना आको यस्तो…!’
यस्तै यस्तै…। तर बिहेको खुसीअगाडि ती कानेखुसी गौण हुन्। तपाईं केही मतलब नगरी बिहेमै ध्यान दिनुहुन्छ।
‘अब हेरौं, कसले शुभकामना दिएछ! फेसबुकमा फोटो पनि राख्नुपर्‍यो,’ भन्दै दुवैले कुम जोडेर मोबाइल पकड्नुभएको मात्रै के थियो, तपाईंको होश उडेर हातबाट मोबाइल खस्यो। फोटो हेर्दा जोडिएका कुम हल्लिएर छुटे।
तपाईंले मन खोलेर आफ्नो पूर्व सम्बन्धबारे भन्दै गर्दा उनैले भनेका हुन्, ‘विगत सबैको हुन्छ। मेरो पनि थियो। के भयो त? अब हामी हाम्रो अगाडिको जीवन सोच्ने नि। बरू फेसबुक कतैतिर पुराना फोटा भए डिलिट गर्दिनू। अब हामी पछाडि फर्केर कहिल्यै नहेर्ने ल?’
साथमा खुब साथ दिने मान्छे हुनसक्छ। पूरै परिवारले ‘केही छैन, मतलब नगर्’ पनि भन्न सक्छ। तर अलिकति त मतलब हुन्छ। मान्छेको मन न हो, दुख्छ। रूने काँध पाए, रून्छ।
‘नयाँ बिहे कति टिक्छ, लु हेरौं न!’
‘यो पनि त्यस्तै त हो नि।’
तर सेलेब्रेटीको अनुहार देखेपछि हाम्रो मन निमोठिएन, बरू फुरूंग भयो। नयाँ ‘मिम मटेरियल’ भेटियो। हामी फोटामा थरिथरिका मिम बनाउँदै, सेयर गर्दै, हाँस्न व्यस्त भयौं।
एउटा, उनको डिभोर्सपछि। अर्को, कार्यक्रम ‘कमेडी च्याम्पियन’मा निर्णायक बनिसकेपछि।
उनको ‘डिभोर्स विषय’ कार्यक्रमको प्रोमो नै राख्न सकिने ‘पन्चलाइन’ सावित भयो। पन्चलाइन सुनेर हामी सब हाँस्यौं।
‘जोक बनाउनेले कुभलो चिताएर पो त्यसो गरे कि,’ त्यस्तो सोचिएको हुँदै होइन। मनोज गजुरेल आफैंलाई पनि छोरीको माया, चिन्ता नहुने हुँदैन। बाहिर अरूले ‘हाहा’ गर्दा भित्र उनको मन कतै कुँडिएको पनि हुनसक्छ। तर उनले मुखै फोरेर केही भन्न सकेनन्। अरू कसैले पनि सोचेन।
किनकी सेलेब्रेटी आफैंले थाहै नपाई स्वीकार गरिसकेका छन्- सेलेब्रेटी भनेका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। सार्वजनिक सम्पत्तिको निजी जीवन हुँदैन।’
गायक यशकुमार र बाबु बोगटीले फिल्म ‘बाटो मुनिको फूल-२’ मा मन बगाएर एउटा मन छुने गीत गाएका छन्-
‘हामी त ढुंगाको मान्छे, जे भने नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ। कहाँ यो मन रुन्छ!’
अनि नबोलेरै, गल्ती नगरेरै, अनुहारकै भरमा ‘आँपे’ भनेर हरेक दिन उडाएको सुन्दा, आयुष्मान देशराज जोशीको मन पनि कुनै बेला खुब रोयो होला।
हाम्रो तर्क भन्छ, ‘अलिअलि त पचाउनुपर्छ नि। सेलेब्रेटी भएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति भइन्छ। सेलेब्रेटीको जिन्दगी उनीहरूको मात्रै होइन, पब्लिकको हो।’
खुब बाठो छ हाम्रो यो ‘पब्लिक’। सेलेब्रेटीको जिन्दगीमाथिको हक फिल्टरले छानीछानी सार्वजनिक सम्पत्ति बनाएको छ। यो पब्लिकले सेलेब्रेटीलाई यति सार्वजनिक बनायो कि गाली गरेर ज्यानै लिन सकियोस्। तर त्यति चाहिँ निजी छोडिदियो कि उनीहरू टाट पल्टिँदा, आफूले ऋण कत्ति बाँड्न नपरोस्।
यही बाँच्न नदिने पब्लिकबीच एउटा प्रसिद्ध आशीर्वाद छ, ‘खुब प्रगति गर्नू नानी। ठूलो मान्छे बन्नू, लोकले चिनोस्।’
आशीर्वादको ग्रेडिङ हुने हो भने, यो ए-प्लस पाउने आशीर्वाद हो। पुस्तौं पुरानो, हरेक पुस्तामा ‘पपुलर’।
ती अश्लील गाली पाउने, मजाक बनाइने सबै सेलेब्रेटीका छोराछोरी, भाञ्जाभाञ्जी, भतिजाभतिजी सबैले यो आशीर्वाद पाउँदा हुन्- ‘खुब प्रगति गर्नू नानी। ठूलो मान्छे बन्नू, लोकले चिनोस्।’
धन्न, आजसम्म कोही बच्चाले त्यो आशीर्वाद पाउनेबित्तिकै आशिष दिनेलाई यस्ता प्रश्न सोधेका छैनन् –
‘कति जनाले चिनेपछि लोकले चिन्ने भइन्छ?’
‘लोकले चिनेर म लोकको हुन्छु कि लोक मेरो?’
‘लोकले चिनेपछि मेरो जिन्दगी कति मेरो रहन्छ?’
‘धेरैले चिन्ने मान्छेमा, सबैको हक लाग्छ?’
‘लोकले रूवाएर म मरेँ भने लोकलाई पाप लाग्छ?’
किनकी प्रश्न सोधिहाले भने, लोकले चिन्ने मान्छेलाई आफूले गरेका गाली सम्झेर, आफूले सेयर गरेका भद्दा ‘मिम’ सम्झिएर, हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई के जवाफ दिउँला?